गोरखा किचनमा खाना खाँदा साङला उपहार ! (भिडियो सहित) - Purbeli News
गोरखा किचनमा खाना खाँदा साङला उपहार ! (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १०, २०७४ समय: २२:१२:००
ईटहरी । आफुलाई पुर्बाञ्चलको ठुलो दाबी गर्ने गोरखा डिपार्टमेण्ट स्टोरको किचनमा खाना खाने क्रममा एक ग्राहकले साङला भेट्टाएका छन । नेपाल सरकारको आधिकारीक निकायले आफुलाई शुद्ध खाना खुवाउने किचनको रुपमा हरियो स्टीकर उपलब्ध गराएको बताउने स्टोरले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको खानामा साङला भेटिएपछि गोरखा किचनको खाना शुद्ध नभएको स्पष्ट देखिएको छ ।
ती ग्राहकले यसअघि पनि गोरखाको खानामा किरा र साङला भेटेको तर माफी मागेका बताएका छन् । उनले बुधबार सो स्टोरमा भेटिएको साङला सहितको खानाको तस्विर ,भिडियो उपलब्ध गराएका छन । पहिल्लाे समय स्टोरको बिराटचौक शाखामा गत बर्षमात्र अखाद्य बस्तु भेटिएको र इटहरीको किचनमा पटक पटक अखाद्य खानाहरु भेटीने गरेको ग्राहकहरुको गुनासो रहेको छ ।
यसअघि पनि डिपार्टमेण्टले सञ्चालन गरेको गोर्खा ब्रेकरी उध्याेगमा म्याद गुज्रिएका सामाग्रीहरु एवं गाेरखा फेला परेको थियो । कहिले कुर्इएकाे पाउराेटी बिक्री त कहिले अखाद्य बस्तु बरामद र कहिले खानामा किरा भेटिनु जस्ता कृयाकलापले प्रतिष्ठित गाेरखा डिपार्टमेन्ट प्रती जनबिश्वास घटदै गएकाे छ । उपभाेक्ताहरूकाे स्वास्थ्यमाथी खेलवाड हुने कुनै किसिमकाे कार्य नगर्ने गाेरखाका प्रवन्धक बलाराम अाचार्यले प्रतिबद्धता जाहेर गरेपनि त्यसकाे कार्यानवयन भने फितलाे देखिएकाे छ । डिपार्टमेण्टले हाल बिराटचौक, पथरी, दमक लगायतका स्थानमा डिर्पाटमेण्ट स्टाेर सञ्चालन गरिरहेको छ भने धरानमा सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ ।